အရှေ့တောင်အာရှ ဘောလုံးလောကဂုဏ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အီသာရစ်ခ်ျ
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ပထမဆုံး အရှေ့တောင်အာရှကစားသမားသမားဖြစ်လာတဲ့ အီသာရစ်ခ်ျ
9 May 2018 . 5:47 PM
နေးလ်အီသာရစ်ခ်ျ Neil Etheridge ဆိုတဲ့ နာမည်က အခုအချိန်မှာ ဘောလုံးပရိသတ်တွေနဲ့ စိမ်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှက ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလိဂ် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ။ အင်္ဂလန်နွယ်ဖွား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်လက်ရွေးစင်အသင်း ဂိုးပေါက်ကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်။ ဖိလစ်ပိုင်လက်ရွေးစင်အသင်းဆိုတာ နောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာ တောက်လျှောက်တိုးတက်လာတဲ့အသင်း။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ထိုင်းကို ယှဉ်ဖို့အထိ ရည်မှန်းချက်ထားနေတဲ့ အသင်း။ ဒီအသင်းရဲ့ ကစားသမားက ပရီးမီးယားလိဂ်ကို တန်းတက်လာတဲ့ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် ကာဒစ်ဖ်စီးတီးအသင်းရဲ့ အဓိက ဂိုးသမား။ အခုတော့ ဖိလစ်ပိုင် လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား အီသာရစ်ခ်ျဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကစားခွင့်ရတဲ့ ပထမဆုံးအရှေ့တောင်အာရှ ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပြီ။
အသက် (၂၈)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အီသာရစ်ခ်ျကို (၁၉၉၀)ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ (၇)ရက်နေ့မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၈)နှစ်သား အရွယ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်တန်းကလပ် ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဘောလုံးအကယ်ဒမီကို တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အရပ်အမောင်းမြင့်မားတဲ့ အီသာရစ်ခ်ျကို ဂိုးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ အကယ်ဒမီနည်းပြက ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ လန်ဒန်မြို့ခံအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဖူလ်ဟမ်အကယ်ဒမီကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ချာလ်တန်၊ ဘရစ္စတိုးလ်ရိုဗာ၊ခရူဝီအသင်းတွေမှာ အငှားသွားရောက် ကစားခဲ့ပြီး ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီအကုန်မှာ ဖူလ်ဟမ်အသင်းက စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အိုးလ်ဟမ်း၊ ချာလ်တန်နဲ့ ဝါဆောလ်အသင်းတွေမှာ ကစားခဲ့ပြီး အင်္ဂလန် League One ကလပ် ဝါဆောလ်အသင်းမှာ လက်စွမ်းပြနေတဲ့ အီသာရစ်ခ်ျကို လာမယ့်ရာသီ ကာဒစ်ဖ်စီးတီးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို တန်းတက်ခွင့်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ နည်းပြ နေးလ်ဝါနော့ခ် Neil Warnock က (၃)နှစ် စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ်ဘောလုံးရာသီ အစမှာတော့ အီသာရစ်ခ်ျအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ကာဒစ်ဖ်အသင်းရဲ့ အဓိကဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ လီကမ့် Lee Camp ရာသီကြိုပွဲစဉ်မှာ ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့လို့ ၂၀၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီအစပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဘာတန်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ စတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး Cleen Sheet ရယူကာ လက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် နည်းပြ နေးလ်ဝါနော့ခ်ရဲ့ ဦးစားပေး ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အီသာရစ်ခ်ျရဲ့ ကာဒစ်ဖ်ကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ အသင်းအတွက် ပွဲစဉ်အားလုံးနီးပါးဝင်ရောက်ကစားခဲ့သလို (၁၉)ပွဲအထိ Cleen Sheet ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီး (၃၇)ဂိုးသာ ခွင့်ပြုခဲ့ရလို့ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ ဂိုးသမားတွေထဲမှာ ပေးဂိုးအနည်းဆုံး ဂိုးသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် (၅၉)ပွဲ ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၁၀ အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။
အီသာရစ်ခ်ျဟာ ဘုန်းမောက်ကို (၀-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲမှာ ကာဒစ်ဖ်အသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး အရှေ့တောင် အာရှဘောလုံးလောကအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပြီး ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမှာ ပယ်နယ်တီကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဟားလ်စီးတီးဂိုးသမား မက်ဂရီဂေါ် McGregor နောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဦးထွက် ပယ်နယ်တီကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဂိုးသမားအဖြစ်ပါ စံချိန်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အီသာရစ်ခ်ျကို အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ကစားသမားအဖြစ် တင်စားဂုဏ်ယူလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် . . . .
7 February 1990 (age 28)
Goalkeeper (Cardiff City)
Number – 25
2003–2006 Chelsea, 2006–2008 Fulham
2008–2014 Fulham, 2008–2009 Leatherhead (loan), 2011 Charlton Athletic (loan), 2012 Bristol Rovers (loan), 2013–2014 Crewe Alexandra (loan), 2014–2015 Oldham Athletic, 2014 Charlton Athletic (loan), 2015 Charlton Athletic, 2015–2017 Walsall, 2017– Cardiff City
2005 England U16 (1), 2008– Philippines (59)
Photo:Goal, Word Press, Twitter
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ပထမဆုံး အရှတေ့ောငျအာရှကစားသမားသမားဖွဈလာတဲ့ အီသာရဈချြ
နေးလျအီသာရဈချြ Neil Etheridge ဆိုတဲ့ နာမညျက အခုအခြိနျမှာ ဘောလုံးပရိသတျတှနေဲ့ စိမျးနပေါလိမျ့မယျ။ ဘောလုံးဖှံ့ဖွိုးမှု အားနညျးတဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှက ကစားသမားတဈယောကျကို ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးလိဂျ ပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈတဲ့ အင်ျဂလနျပရီးမီးယားလိဂျ ပွိုငျပှဲမှာ မွငျတှခေဲ့ရပွီ။ အင်ျဂလနျနှယျဖှား ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသားတဈယောကျဖွဈပွီး ဖိလဈပိုငျလကျရှေးစငျအသငျး ဂိုးပေါကျကို အကောငျးဆုံးကာကှယျပေးနတေဲ့ ကစားသမားတဈယောကျ။ ဖိလဈပိုငျလကျရှေးစငျအသငျးဆိုတာ နောကျပိုငျးခတျေတှမှော တောကျလြှောကျတိုးတကျလာတဲ့အသငျး။ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ အကောငျးဆုံးလို့ ပွောနိုငျတဲ့ ထိုငျးကို ယှဉျဖို့အထိ ရညျမှနျးခကျြထားနတေဲ့ အသငျး။ ဒီအသငျးရဲ့ ကစားသမားက ပရီးမီးယားလိဂျကို တနျးတကျလာတဲ့ လိဂျခနျြပီယံရှဈကလပျ ကာဒဈဖျစီးတီးအသငျးရဲ့ အဓိက ဂိုးသမား။ အခုတော့ ဖိလဈပိုငျ လကျရှေးစငျဂိုးသမား အီသာရဈချြဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကစားခှငျ့ရတဲ့ ပထမဆုံးအရှတေ့ောငျအာရှ ကစားသမားဖွဈလာခဲ့ပွီ။
အသကျ (၂၈)နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ အီသာရဈချြကို (၁၉၉၀)ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ၊ (၇)ရကျနမှေ့ာ အင်ျဂလနျနိုငျငံ၊ လနျဒနျမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၈)နှဈသား အရှယျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျထိပျတနျးကလပျ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ဘောလုံးအကယျဒမီကို တိုကျစဈမှူးတဈဦးအဖွဈ ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ အရပျအမောငျးမွငျ့မားတဲ့ အီသာရဈချြကို ဂိုးသမားတဈဦးဖွဈလာဖို့ အကယျဒမီနညျးပွက ခိုငျးစခေဲ့တယျ။ ၂၀၀၆ ခုနှဈမှာ လနျဒနျမွို့ခံအသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ ဖူလျဟမျအကယျဒမီကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ ပရျောဖကျရှငျနယျစာခြုပျကို ခြုပျဆိုခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၀ ခုနှဈကစတငျပွီး ၂၀၁၄ ခုနှဈအထိ ခြာလျတနျ၊ ဘရစ်စတိုးလျရိုဗာ၊ခရူဝီအသငျးတှမှော အငှားသှားရောကျ ကစားခဲ့ပွီး ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီအကုနျမှာ ဖူလျဟမျအသငျးက စာခြုပျဖကျြသိမျးခဲ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ အိုးလျဟမျး၊ ခြာလျတနျနဲ့ ဝါဆောလျအသငျးတှမှော ကစားခဲ့ပွီး အင်ျဂလနျ League One ကလပျ ဝါဆောလျအသငျးမှာ လကျစှမျးပွနတေဲ့ အီသာရဈချြကို လာမယျ့ရာသီ ကာဒဈဖျစီးတီးအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကို တနျးတကျခှငျ့ရရှိအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တဲ့ နညျးပွ နေးလျဝါနော့ချ Neil Warnock က (၃)နှဈ စာခြုပျနဲ့ ချေါယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခုနှဈဘောလုံးရာသီ အစမှာတော့ အီသာရဈချြအတှကျ အခှငျ့အလမျးကောငျးတဈရပျဖွဈလာစခေဲ့ပါတယျ။ ကာဒဈဖျအသငျးရဲ့ အဓိကဂိုးသမားဖွဈတဲ့ လီကမျ့ Lee Camp ရာသီကွိုပှဲစဉျမှာ ဒဏျရာရရှိသှားခဲ့လို့ ၂၀၀၁၇-၁၈ ဘောလုံးရာသီအစပှဲစဉျဖွဈတဲ့ ဘာတနျအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျမှာ စတငျပှဲထှကျခှငျ့ရရှိခဲ့ပွီး Cleen Sheet ရယူကာ လကျစှမျးပွနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ နညျးပွ နေးလျဝါနော့ချရဲ့ ဦးစားပေး ကစားသမားဖွဈလာခဲ့တယျ။ အီသာရဈချြရဲ့ ကာဒဈဖျကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ အသငျးအတှကျ ပှဲစဉျအားလုံးနီးပါးဝငျရောကျကစားခဲ့သလို (၁၉)ပှဲအထိ Cleen Sheet ရယူပေးနိုငျခဲ့ပွီး (၃၇)ဂိုးသာ ခှငျ့ပွုခဲ့ရလို့ လိဂျခနျြပီယံရှဈပွိုငျပှဲရဲ့ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ရတဲ့ ဂိုးသမားတှထေဲမှာ ပေးဂိုးအနညျးဆုံး ဂိုးသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ (၅၉)ပှဲ ပါဝငျကစားပေးခဲ့ဖူးပွီး ၂၀၁၀ အာဆီယံဆူဇူကီးဖလားပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာအသငျးနဲ့ တှဆေုံ့စဉျ ပါဝငျကစားခဲ့ပါတယျ။
အီသာရဈချြဟာ ဘုနျးမောကျကို (ဝ-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ပှဲမှာ ကာဒဈဖျအသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားခဲ့ပွီး အရှတေ့ောငျ အာရှဘောလုံးလောကအတှကျ ဂုဏျယူစရာကောငျးတဲ့ မှတျတမျးတဈခုကို ရယူနိုငျခဲ့ပါပွီ။ နောကျပွီး ဘုနျးမောကျနဲ့ပှဲမှာ ပယျနယျတီကာကှယျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့လညျး ၂၀၁၃ ခုနှဈက ဟားလျစီးတီးဂိုးသမား မကျဂရီဂျေါ McGregor နောကျပိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျပှဲဦးထှကျ ပယျနယျတီကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဂိုးသမားအဖွဈပါ စံခြိနျတငျခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အီသာရဈချြကို အရှတေ့ောငျအာရှရဲ့ ဂုဏျထူးဆောငျ ကစားသမားအဖွဈ တငျစားဂုဏျယူလိုကျရတာပဲဖွဈပါတယျ . . . .